I-Himalaya Tour Package | Shayela ku-91-993.702.7574 Ukubhuka
I-Packaging Tour ye-Himalaya inikeza inketho engavamile yokuvakasha ngezinhlobonhlobo zezinto ezikhangayo nokubukwa kwe-panoramic eziteshini zezintaba ezinhle. Etshalwe ngaphezu kwezizwe eziyisikhombisa zaseNdiya, i-Himalayas ngokwayo yenza isimangaliso kubantu abahamba ngezinyawo. Ikhebula lethu le-Himalaya Tour livakashele ezintabeni ezibukeke kahle, ukuhamba ngezinyawo, ikamu, u-rafting emfuleni, nokuhlangenwe nakho kwamadwala. Ngaphandle kwalokho, iphakethe le-Himalaya lokuvakasha libuye likukhuthaze ekuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho kwezinto ezihambelayo ze-Himalayas yamaHindu namaBuddhist abagibeli. I-Packaging Tour ye-Himalaya ikunikeza okuhlangenwe nakho okukhunjulwa kweholidini okugcwele imisebenzi ejabulisayo futhi ehambela ekuhlukeni okukhulu kwamasiko Iziteshi zezintaba ze-Himalayan.
Izindawo ezikhangayo zihlanganisa iKashmir, Leh-Ladakh, Himachal, neTutarakhand. Ukuvakasha kohambo lwe-Himalaya kuhlanganisa u-Amarnath yatra, uKailash Mansarovar yatra, uPanch-kedar yatra, noMa Vaishno Devi yatra. Izindawo ezakhelene nezwe ezimbozwe ngaphansi kohambo lwe-Himalaya zihlanganisa ukuvakasha eNepal, eBhutan naseTibet-amazwe lapho i-Himalaya enkulu iqhuma khona ubuhle bayo. Ngenkathi imisebenzi evelele kakhulu e-Himalaya Tour Package ihamba ngezinyawo, i-rafting, i-rafting, futhi ikamende, kodwa i-Himalaya Tour Package iheha futhi izivakashi ezithanda ukuthula nokuthanda izinto ezingokomoya. Ngamagama ambalwa iphakheji ye-Himalaya Tour inikeza ukudla okuphelele engqondweni, emzimbeni nasemphefumulweni.
NJP I-RAILWAY STATION / IBAGDOGRA AIRPORT- IGANGTOK (I-02 NIGHT) - ISIHLANGANO (02 NIGHT) - NJP RAILWAY STATION / BAGDOGRA AIRPORT
Uhlelo lwe-04 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 320
USUKU LWE-01: I-ARRIVAL NJP I-RAILWAY STATION / (i-IXB) UBAGDOGRA UMLANDI- IGANGTOK
Lapho ufika e-NJP Railway Station / (i-IXB) i-Bagdogra Airport, (413 Ft / 126 Mts) uzothatha futhi uthumele ku-Gangtok (5412 Ft / 1650 Mts, 130 Kms / 04 kuya ku-05 Hrs). Ngobusuku ehhotela.
ULANGA 02: GANGTOK - TSHANGU LAKE & BABA MANDIR EXCURSION
Ngemuva kokudla kwasekuseni, ekuseni, qala ukuvakashela e-Tshangu Lake (12400Ft / 3780 Mts / 43Kms ku-3Hrs ngendlela ephuma eGangtok) & Baba Mandir (13100Ft / 3994 Mts / 16Kms ku-1Hrs) enye indlela esuka eTshangu Lake. Ikhona endaweni ephakeme ye-12400Ft / 3780 Mts / 43Kms ku-3Hrs ngendlela eyodwa, ngokujula okuphakathi kwe-50 ft. Amanzi apholile eLwandle ahambisana ngokuphelele nobuhle obuhle nxazonke. Buyela e-Gangtok nasebusuku busuku ehhotela. (Uma kwenzeka i-Landslide noma ngenxa yanoma yiziphi ezinye izizathu uma iLwandle LwaTshangu livaliwe khona-ke indawo yokubona indawo izonikezwa)
DAY 03: GANGTOK - DARJEELING
Ekuseni kuhamba usuku lwesigamu (ama-04 hrs) ukubuka indawo ehlanganisa i-Jhakri Water Falls kanye no-Do-rul Chhorten, i-Research Institute ye-Tibetology (Kuvaliwe ngeSonto), i-Directorate of Handicraft & Handloom (Ivaliwe ngeSonto) ne-Flower Show. Ukudluliselwa kwe-ntambama eDarjeeling (6710 Ft / 2046 Mts, i-110 Kms / 04 kuya kuma-05 Hrs). Ukungena kanye nobusuku ehhotela.
Ukuhamba ekuseni kuTiger Hills (8482 Ft / 2586 Mts ezungeze i-4 AM) ukubuka ukuphuma kwelanga ngaphezu kwe-Kanchendzonga Peak (ngokuya kwesimo sezulu esicacile). Ngesikhathi sokubuyela emuva kwendwendwe ye-Ghoom, i-Batasia Loop. Ngemuva kokudla kwasekuseni kuhamba ngesikhashana sokubona indawo yethempeli laseJapan, Ukuthula pagoda, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park & ​​Himalayan Mountaineering Institute (Kuvaliwe ngoLwesine), iDarjeeling Ropeway Ride (Izindleko zamathikithi azihlanganisiwe & zizobe ziphakathi kwe-INR 180.00 ngomuntu ngamunye) Ukuqapha & I-Gombu Rock, Isikhungo Sosizo Sokuzisiza saseTibetan (Kuvaliwe ngeSonto) nokubuka kwe-Panoramic yeThey Estate. Ngobusuku ehhotela.
DAY 05: DARJEELING - NJP STATION / BAGDOGRA AIRPORT
Namuhla udlulisela ku-NJP Railway Station / (i-IXB) i-Bagdogra Airport (413 Ft / 126 Mts, i-100 Kms / 03 kuya ku-04 Hrs) ukuze uxhumane nokuhamba kwakho / uhambo.